Kajy ny boky na ny lavaka anaty lavaka ny
Kajy ny boky ny sehatra-sariety
Ny halavan'ny sehatra-sariety L
Mamaritra ny hasarobidin'ny excavation
Mihady (ny 1 metatra toratelo)
Fanesorana ny nofon-tany (ny 1 metatra toratelo)
L - ny tontalin'ny halavan'ny sehatra-sariety, na kady
A - sakany teo an-tampon'ny
B - ambany sakany
H - lavaka lalina
Program no manao kajy ny boky sy ny faritra ambonin'ny amin'ny hady kely.
Raha ny sakan'ny ny ambony sy ambany ny hady kely dia samy hafa, dia ilaina bebe kokoa boky kajy C ary boky ny tehezan-tendrombohitra D.
Fa ny fanorenana ny fifandraisana, fantsona, na ny fametrahana esory sewer fototra ao amin'ny faritra misy anao dia mety mila mihady hady kely. Afaka manasa manam-pahaizana manokana mba hanao, ary afaka manao ny asa ny tenanao. Fa raha ny marina, ao amin'ny toe-javatra roa ireo dia mila mahafantatra ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ny amin'ny hady kely. Kajy izy ireo hanampy ny fandaharana. Mifototra amin'ny lavany, ny habeny sy ny halaliny sehatra-sariety, dia mamantatra ny boky sy ny faritra ambonin'ny. Raha izany, raha ny sakan'ny ny ambony sy ny ambany amin'ny sehatra-sariety miovaova, ary dia natao toy ny vola ilaina ny tehezan-tendrombohitra. Kajy ny boky ny sehatra-sariety dia hanampy anao tsy mba hanamorana ny asan'izy ireo, fa koa mba manao kajy ny vidin'ny asa tany, raha manapa-kevitra ny hampiasa ny fotoam-pivavahana ny manam-pahaizana manokana.
Misy fomba telo trenching. Io tanana trenching mampiasa angadin'omby na trencher tanana.
Ny tranga voalohany hampiasa matetika any, izay misy ny tsy mahazo fitaovana manokana. Izany dia mandany fotoana Somary fomba nandavaka lavaka, izay misy fiantraikany lehibe ny hatsaran'ny ny tany.
Hand trenchers hampihena ny fotoana ny asa toy izany. Dia azo vidiana na ampanofaina. Azonao atao ihany koa ny hanafatra iray lavaka ao amin'ny orinasa manokana. Avy eo dia manao matihanina.
Ampiasaina ny excavator izay an-toerana dia afaka manery fitaovana fanorenana, ary koa ny toerana misy ny be dia be ny asa. Alohan'ny nandriatra ny backhoe tokony hanamarina ny sakan'ny sehatra-sariety ambany mba haka ny fiara ny haben'ny ny siny, izay mifanaraka ho azy.
Raha manapa-kevitra ny mihady lavaka ny tenanao aloha, dia tokony ho fantatrao fa noho ny karazana asa mitaky iray halalin'ny amin'ny hady kely. Ohatra, ny telegrama, matetika mihady lavaka lalina 70 cm. Ary mila lalina kokoa Sewer hady kely. Dia tsara ny halalin'ny antsasaky ny metatra, izany no lehibe noho ny halalin'ny tany matin'ny hatsiaka.
Ny sakan'ny sehatra-sariety fiantraikany ihany koa ny karazana asa. Ny kely indrindra dia refesina sakany eo amin'ny farany ambany amin'ny sehatra-sariety, ary tsy maintsy mitovy ny karazana sy ny haben'ny fantsona stacked ao aminy.